The Ab Presents Nepal » के पाथीभरामाईमा साक्षात देवी नै छन त ? यस्ता छन दर्शनार्थीले मान्दै आएका बिश्वास र वास्तविकता!
के पाथीभरामाईमा साक्षात देवी नै छन त ? यस्ता छन दर्शनार्थीले मान्दै आएका बिश्वास र वास्तविकता!
सामान्यतया अहिले मानिस पुजापाठमा भन्दा विज्ञानमा विश्वास गर्ने गर्छन् । एक भक्तले भने म पूजा पाठमा विश्वास नगर्ने मान्छे, मेरो छोरो प्यारालाइसीस भए पछि यहि मन्दिरमा आएर पूजा गरेको थिए । आज मेरो छोरो यो मन्दिरलाई नै जन्मदाता ठान्छ | झापाको दक्षिणी गाबिस गोलधाप ४ मा रहेको सिंहवाहिनी शक्तिपीठका चमत्कार अनगिन्ती छन् । २०६४ सालमा प्यारालाइसिस रोगीलाई पुनर्जिवन दिएपछि उक्त शक्तिपीठ विश्वासीलो बन्दै गएको हो ।
विकास र प्रवद्र्धनबाट ओझेलमा परेको शक्तिपीठ झापाको पाथीभरा माता भएको स्थानीय वृद्धवृद्धा बताउँछन् ।गोल्धापबासीका अनुसार मेची अञ्चलमा ३ स्थानमा पाथीभरा माता रहेका छन् । ताप्लेजुङ्ग, इलाम र झापामा पाथीभरा मन्दिर भएपनि झापाको पाथीभरा मन्दिरलाई हेला गरिएको गुनासो गरिएको छ । झापाको विर्तामोडबाट १० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको सो मन्दिर आर्थिक अभावका कारण व्यवस्थित गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली बताउँछन्’ ।
उनले झापाको पाथीभरालाई विकास गरी धार्मिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन् । पूर्वाञ्चलकै विशिष्ठ धार्मिक स्थलहरु मध्ये सिंहवाहिन शक्तिपीठ देव स्थालमा अनौठो वृक्ष रहेको छ । वृक्षलाई कोट्याउँदा रगत बग्ने गरेको मन्दिर समितिले जनाएको छ । सिंहवाहिनी शक्तिपीठको चौतर्फी विकासका लागि यही फागुन ५ गतेदेखि १६ गतेसम्म शिव महापूर्ण ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरिएको छ’ ।
धार्मिक एवम् ऐतिहासिक स्थल सिंहवाहिनी शक्तिपीठ वि।सं। १८९५ मा घना जंगलको रुपमा थियो । मानिसहरुको आवत जावत विरलै हुने भएपनि केही आवगतजावत गर्नेहरुले उक्त स्थानको चमत्कार सुनाउने गरेका छन् । स्थानीय धर्मनुरागीका अनुसार पुर्णीमाको रातमा नागनागिनहरुको नृत्य तथा सहवास हुने, औंशीको रातमा नागनागिनले शक्तिपीठलाई उज्यालो बनाउने गरेको बताउँछन् ।’ अनौठा अनौठा बाजा बज्ने सो स्थानमा सयौंको मनोकांक्षा पूरा भएपछि सहयोग गर्नेहरु पनि आउन थालेको अध्यक्ष ओलीले बता’ए ।
वार्षिक डेढ लाख धर्मावलम्बी दर्शन गर्न आउने गरेको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सञ्चालन हुन लागेको महापूराण बारे बुधबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै पूराण आयोजक समितिका अध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटाले पूर्वमै सिंहदेवी शक्तिपीठमा आश्चर्य शक्ति भएको दावी गरे । उनले ताप्लेजुङ्गको झैं पाथीभरा झापामा भएको बताए । मन्दिर परिषरमा रहेको अनौठो वृक्षमा ४ वटा पंक्षी ९लाटकोसेरो० लामो समयदेखि बस्दै आएका छन्’ ।
जुठो बार्दै गरेको परिवारका केही सदस्य, महिनावारी भएका महिलालाई मन्दिरको मुल गेटमा नपुग्दै पंक्षीले रोक्ने गरेको स्थानीय धामी श्रीप्रसाद बस्नेत बताउँछन् । उनले भने, ‘यो मन्दिरमा ताप्लेजुङकै पाथीभरा माता पनि हुनुहुन्छ ।पाप सम्झेर आउनेलाई पीठमा माताको शक्तिले प्रवेश मै रोक लगाउने उनले थपे । पीठमा पाथीभरा माता, दक्षिणकाली, सिंहवाहीनीको मुलथान, शिव र कृष्ण भगवानको मन्दिर अवस्थित छन्’ ।
पत्रकार भेटघाटमा पूराण आयोजक समितिका संयोजक सापकोटाले ओझेलमा परेको सिंहवाहीनी शक्तिपीठलाई उत्थान गर्न सबैको भूमिका रहने बताए । घरबाट नजिकै मन्दिर रहेपनि वास्ता नगर्ने गाविस कर्मचारी रेखा छोराले पाएको पुनर्जिवन पछि हप्तै पिछे पुजा पाठमा संलग्न हुने गरेको बताउँछिन् । ‘धेरै ठाउँमा उपचार गर्न लगे पनि केही सुधार नहुँदा मन्दिरमै भाकल गरेर छोरा ठीक भएको उनको अनुभव छ’ ।
उनले भने -:यो मन्दिरमा ताप्लेजुङकै पाथीभरा माता पनि हुनुहुन्छ ।पाप सम्झेर आउनेलाई पीठमा माताको शक्तिले प्रवेश मै रोक लगाउने उनले थपे । पीठमा पाथीभरा माता, दक्षिणकाली, सिंहवाहीनीको मुलथान, शिव र कृष्ण भगवानको मन्दिर अवस्थित छन् । पत्रकार भेटघाटमा पूराण आयोजक समितिका संयोजक सापकोटाले ओझेलमा परेको सिंहवाहीनी शक्तिपीठलाई उत्थान गर्न सबैको भूमिका रहने बताए । आस्थाले भरिएकी साक्षत देवी पाथिभराको सम्मान र दर्शनमा सेयर गरिदिनुहोला ‘।